Xasan Sh. Maxamuud oo rajo weyn ka qaba inuu mar labaad Soomaaliya hogaamiyo – Kalfadhi
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Xasan Sh. Maxamuud, waxa uu Kalfadhi u sheegay inuu rajo weyn ka qabo inuu dib u hogaamiyo Soomaaliya. Waxa uu sheegay in qabyadii uu ka tagay oo, sida uu sheegay, wali qabyo ah, siina ahaan doonta uu ku talogalayo inuu dhameystiro, haddii uu mar labaad xukunka qabto. Sida uu Kalfadhi u sheegay, waxa uu doonayaa inuu hagaajiyo sida ay shacabku ugu kalsoonaan lahaayeen dowladdooda. Xasan waxa uu Kalfadhi kala hadlay:-
1. Nidaamka Xisbiyada Badan, Mucaaradnimada iyo Dowladnimada
2. Shirka Shidaalka Soomaaliya ee Landhan, Ingiriiska
3. Shirkadda DP World ee Baarlamaanku Diiday
4. Dib-u-eegistii Xeerka Bangiga Dhexe ee Golaha Shacabka
5. Waxa uu Qabanayo Haddii uu Dib Ugu Soo Laabto Xakunka
6. Wadahadalada Hakad Ku Jira ee Somaliland iyo Dowladd Federaalka Soomaaliya (DFS)
7. Garsoorka, Cadaaladda iyo Kalsoonida Shacabka iyo
8. Doorka Dib-udhiska Dalka ee Wacyiga Siyaasiga ah ee Dhalinyarada
Mudane Xasan Sh. Maxamuud, oo hadda ah Xildhibaan ka tirsan Golaha Shacabka iyo Guddoomiyaha Xisbiga Midow Nabadda iyo Hormarka (UPD), waxa uu qabaa in dadka oo dowladnimada taageera ay ka horeyso in ay dowladdoodu suurtagaliso iney iyada iyo shacabku isku xirmaan. Taas ayuu sheegay in ay ku imaan karto inaan dadka lagu dhibin u dowladeynta, sida uu hadalka u dhigay.
Waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in la sugo ammaanka, “waxaana arrintaas fure u ah” buu yiri “shacabka”. Dowladda ayuu sheegay in, si ay u sugto ammaanka, aysan sax ahayn in ay ciriiri geliso nolosha shacabka, taas oo ah xaalad jirtay xitaa xiligii uu isagu ahaa Madaxweynaha dalka. “Dowladdu waxay sugi kartaa ammaanka iyada oo isticmaaleysa shacabka” ayuu yiri Xasan Sh. Maxamuud.
Iney dadku helaan caddaalad, garsoor iyo maxkamado u qaada si caddaalad ah dacwadaha dambiyada la xiriira siyaasadda, jarriimooyinka iyo dambiyada rayidka ah ayuu Xasan sheegay iney kaalin weyn ka qaadan karto xalka siyaasiga ah iyo kan ammaanka dalka. Waqtigiisii ayuu sheegay inuu Golaha Shacabku diiday meel-marinta sharcigii lagu hagaajin lahaa garsoorka.
Xukumadda hadda jirta ayuu sheegay in ay Golaha Shacabka kala noqotay dhamaan wixii Hindise Sharciyeedka ahaa ee ay xukumaddiisii u gudbisay Baarlamaankii 9-aad, “waxaana qeyb ka ah” buu yiri “Hindisaha Sharciga Adeegga Garsoorka Qaranka”.
Waxa uu xusay in haddii aan dib loo bilaabin wada-hadaladii Somaliland iyo DFS ay halisteeda leedahay. Waxa uu sheegay in Somaliland laga galay godob, sida uu sheegay, aad u xanuun badan oo isugu jirta “xasuuq, baabi’in hantiyadeed iyo barakicin dad shacab ah”. “In arrintaas la xaliyo, oo gocoshadaas la tirtiro, waxay u baahan tahay” buu yiri “waqti dheer, u samrid iyo ilaalin fara badan”. Meel fiican iney soo gaarsiiyeen ayuu sheegay Mudane Xasan Sheekh.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sh. Maxamuud oo dhaliishan Madaxweynaha xilka kala wareegay 8-dii Febaraayo, 2018 ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxa uu sheegay inuu saluugsan yahay wacyiga siyaasiga ah ee dadka Soomaaliyeed. Waxa uu, ka UPD ahaan, sheegay in ay xoogga saarayaan kor u qaadidda fahamka mushkiladaha Soomaaliya ka haysta dhalinyada, oo uu sheegay in ay yihiin dadka ugu badan shacabka.
Shir lagu qorsheynayo shaqo lagu qabyo-tirayo Dastuurka oo Muqdisho ka furmay